Real Madrid Oo Guul Soo Laabasho Ah Santiago Bernabeu Kaga Gaadhay Kooxda Huesca Iyo Karim Benzema Oo Goolka Guusha Dhaliyay Dhamaadkii Ciyaarta. - Gool24.Net
Real Madrid Oo Guul Soo Laabasho Ah Santiago Bernabeu Kaga Gaadhay Kooxda Huesca Iyo Karim Benzema Oo Goolka Guusha Dhaliyay Dhamaadkii Ciyaarta.
Real Madrid ayaa Santiago Bernabeu guul soo laabasho ah kaga gaadhay kooxda Huesca oo gool kaga hor martay isla markaana babraro kale ciyaarta ugu soo laabtay daqiiqadii 74 aad laakiin Karim Benzema ayaa Madrid goolka guusha u saxiixay daqiiqadii 89 aad ee dhamaadkii ciyaarta.
Inkasta oo uu Zidane isbadal aad u badan ku sameeyay shaxdiisa isla markaana uu fursad siiyay ciyaartoy badan oo aan hore waqti badan u helin, haddana Los Blancos ayaa ka soo kabsatay gool ay kooxda Huesca kaga hor martay bilawgii ciyaarta.
Daqiiqadii 3 aad ee bilawgii ciyaartaba kooxda martida ahayd ee Huesca ayaa Santiago Bernabeu neefta dib ugu celisay kadib marki uu Hernandez goolka furitaanka u saxiixay wuxuuna ahaa gool sabab u noqday in Real Madrid ay ku qasbanaatay in ay markiiba u hawl gashay goolka barbaraha.
Laakiin Real Madrid ayaa goolkeeda barbaraha la timid daqiiqadii 25 aad waxaana goolkan u saxiixay Isco kaas oo muujiyay in uu hadda ku soo laabanayo ciyaartoygii uu ahaa wuxuuna Zidane iyo kooxdiisa Madrid siiyay goolka ay ciyaarta ugu soo laabteen.
Laakiin qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kalanastay barbaro 1-1 ah iyada oo Real Madrid aan awoodin in ay qaybtii hore ee ciyaarta samayso soo laabasho dhamaysitran.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Real Madrid soo laabatay iyada oo dardar xoogan ku socotay waxayna markiiba culays saartay kooxda Huesca.
Laakiin daqiiqadii 62 aad ayay Real Madrid dhinaca kale u dhigtay natiijadii ciyaarta ee goolka looga hormaray waxaana goolkan u saxiixay Dani Ceballos oo ka mid ahaa ciyaartoyda uu Zidane kulankan ku soo bilaabay ee uu fursada siiyay wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2-1 ay Madrid hogaanka markeeda kula wareegtay.
Kooxda martida ahayd ee Huesca ayaan sidaa ku dhiman waxayna daqiiqadii 74 aad heshay fursada ay kula timid goolkeeda labaad ee ay xaalada ugu adkaysay Real Madrid waxaana goolkan u dhaliyay Etxeita kaas oo ciyaarta ku soo celiyay barbaro 2-2 ah.
Real Madrid ayaa u baahatay ilaa daqaqadii 89 aad ee dhamaadkii ciyaarta si ay ula timaado goolka saddexaad ee ay guusha kaga gaadhay kooxda Huesca waxaana goolkan dhaliyay Karim Benzema kaas oo caawin ka helay Marcelo wuxuuna ciyaarta ka dhigay 3-2 ay Madrid hogaanka kula soo noqtay.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-2 ay Real Madrid guul kaga gaadhay kooxda sida wayn u dagaalantay ee Huesca wuxuuna Zidane guushan ku gaadhay shaxdii uu isbadalka badan ku sameeyay ee ay ka maqnaayeen ciyaartoyda badan ee muhiimka ahaa.